Skate Guta, Vagadziri veAlto's Adventure Vazivise Nyowani Skateboard Game | IPhone nhau
Skate Guta, ivo vagadziri veAlto's Adventure vanozivisa mutsva Skateboard mutambo
Ini pachangu handisi munhu anonyanya kufarira zita racho, asi patinenge tichitsvaga chikamu chemitambo yemavhidhiyo yeApp Store, mumwe wemitambo yakatarwa yatinowanzoona ndeyeAlto's Adventure, zita rakagadzirwa naSnowman. Kana iwe uchida kwavo kusikwa kwekare, iwe uchave unofara kunzwa kuti Snowman akabatana neAgens uye akazivisa Skate Guta, mutambo waungangoda zvakanyanya senge yapfuura asi uyo mutambo wake mukuru Skateboard uye kwete Snowboard.
Iwo maSnowman nemaAgener matimu anoti vakafarira iyo Skateboard kwenguva yakareba uye kuti kugovana kuda kwavo mutambo uyu kwavatungamira kuti vauye pamwechete kuti vagadzire mutambo nezvazvo. Ryan Cash, muvambi weSnowman, akatsanangura maitiro Tony Hawk's Pro Skater mutambo waakamukurudzira mukugadzira Alto's Adventure.
Skate Guta rakazvarwa kubva mukuda kweSkateboarding kwevagadziri vaviri
Sezvatinogona kuona mumasekondi ekupedzisira evhidhiyo yekusimudzira yeSkate City, mifananidzo yeiyi skateboard mutambo mutsva ichave iri nani kupfuura iwo eAlto's Adventure, asi ini ndinofunga tinogona kuvimbisa kuti havazove iyo yakasimba poindi yemutambo , kana isu tinotarisira kuti Usave. Ko kana vachida aya magirafu ndeekuti ivo vachakwanisa kuratidza inofamba metropolitan nharaunda netraffic, vanofamba netsoka uye zvimwe zvinhu. Zvinotaridzawo kuti mamiriro ekunze achachinja.
Mune mawonero angu, iyo Vhidhiyo yapfuura inoedza kubata vateereri zvakanyanya kupfuura kuratidza mutambo wacho pachawo, chimwe chinhu chinoratidzwa nemasekondi makumi mairi nemashanu maunoona (akaipa) madhirowa e skateboarder achifamba kuburikidza nezviitiko zvakasiyana uye iwo chete masekondi matanhatu emifananidzo yemutambo pachawo. Chete neizvi isu hatigone kuziva zvakawanda pamusoro pekuti Skate City ichave yakaita sei asi, kana ikakwanisa kuve hafu seyakakurumbira seAlto's Adventure, tinogona kutaura kuti ichave yakabudirira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » Skate Guta, ivo vagadziri veAlto's Adventure vanozivisa mutsva Skateboard mutambo
Apple inofunga kutora matanho epamutemo kurwisa VaTrump pamwe neanorwisa-kupinda
Tim Cook anovimbisa zvimwe maficha eApple TV